China China Factory Micro Glass Beads ho an'ny orinasa Filler sy mpamatsy | Huabang
China Factory Micro Glass Beads ho an'ny filler
Endri-javatra amin'ny vakana fitaratra: Low conductivity mafana, insulation feo avo, dispersion avo, insulation elektrika tsara sy ny fahamarinan-toerana mafana.
1. Ny lanjany maivana sy ny volume lehibe. Ny hakitroky ny vakana fitaratra poakaty dia eo amin'ny iray ampahafolon'ny hakitroky ny poti famenoana nentim-paharazana. Aorian'ny famenoana dia afaka mampihena be ny lanjan'ny vokatra izy io, manolo sy mamonjy resin'ny famokarana bebe kokoa, ary mampihena ny vidin'ny vokatra.
2. Izy io dia manana endrika organika novaina (lipophilic). Ny vakana fitaratra hollow dia mora mando sy miparitaka, ary azo fenoina amin'ny ankamaroan'ny resin'ny thermoplastic thermosetting, toy ny polyester, epoxy, polyurethane, sns.
3. Fanaparitahana avo sy liquidity tsara. Koa satria ny vakana fitaratra hollow dia spheres kely, manana fluidity tsara kokoa amin'ny resin-drano izy ireo noho ny flake, fanjaitra na famenoana endrika tsy ara-dalàna, noho izany dia manana fampisehoana famenoana lasitra tsara izy ireo. Ny tena zava-dehibe dia ny microbeads kely dia isotropic, noho izany dia tsy misy tsy fitovian-kevitra amin'ny tahan'ny fihenan'ny faritra samihafa vokatry ny orientation, ary azo antoka ny fahamarinan'ny vokatra tsy misy warping.
4. Insulation hafanana, insulation feo, insulation, ambany ny tahan'ny hisakana ny fiasan'ireny ny rano. Entona manify ny ao anaty vakana fitaratra, noho izany dia manana ny toetran'ny insulation feo sy insulation hafanana, ary filler tena tsara ho an'ny fiarovana hafanana isan-karazany sy ny feo insulation vokatra. Ny fananana insulation mafana amin'ny microspheres fitaratra hollow dia azo ampiasaina mba hiarovana ny vokatra amin'ny fahatafintohinana mafana vokatry ny fifandimbiasan'ny hafanana haingana sy ny toe-javatra mangatsiaka haingana. Ny fanoherana manokana avo lenta sy ny fitrandrahana rano faran'izay ambany dia mahatonga azy io ho be mpampiasa amin'ny fanodinana sy famokarana fitaovana insulation cable.
5. Misoroka menaka ambany. Ny potika amin'ny sphere dia mamaritra fa manana velaran-tany manokana faran'izay kely indrindra izy ary ambany ny fitrandrahana solika. Ny habetsaky ny resin dia mety hihena be mandritra ny fampiasana, ary ny viscosity dia tsy hitombo be na dia eo ambanin'ny toeran'ny fanampiny avo aza, izay manatsara ny famokarana sy ny fepetra fiasana. Ampitomboy 10% hatramin'ny 20% ny fahombiazan'ny famokarana.
teo aloha: Hot sale Shina High Quality Spot Polypropylene Lamba White Tourmaline Powder
Manaraka: Fibre asbestos Sepiolite Fibre ho an'ny fandavahana
vakana fitaratra ho filler
vakana fitaratra mikro
Boky fitaratra kristaly miloko ho an'ny haingon-trano zaridaina